दुर्लभ रुपमा पाईने एकमुखे रुद्राक्षको महिमा र वास्तविकता, के छ त रोचक तथ्य ? जानकारी लिनुहोस ! - Sabal Post
दुर्लभ रुपमा पाईने एकमुखे रुद्राक्षको महिमा र वास्तविकता, के छ त रोचक तथ्य ? जानकारी लिनुहोस !
सर्वप्रथम त एउटा कुरा, यो रुद्राक्ष लाई आफ्नो प्रोफाइलमा शेयर गर्नुहोस , फलिफाप हुन सक्छ, ग्रहदशा शान्त हुन सक्छ र समस्या हरु दुर हुन सक्छ । शेयर नगर्दा जिन्दगिमा अझ बढी दुख आउन सक्छ किनकी सजिलै एक मुखे रुद्राक्षको दर्सन पाइदैन ।हजुरलाई थाहा छ ? एक मुखे रद्राक्ष को दर्शनले नसोचेको ठाउबाट धन “लाभ” हुन्छ । त्यसैले कमेन्टमा “ॐ “लेखेर शेयर गर्नुहोस ३ दिन भित्र आकस्मिक धनको योग हुनेछ बेवास्ता गरेमा “अशुभ” हुन सक्ला ।एकमुखे रुद्राक्ष यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ ।
अत्यन्तै दुर्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ ।विश्वासीहरूका अनुसार, यसलाई धारण गरे सुखशान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य र बुद्धि मिल्छ । चरक संहितामा पनि यसबारे उल्लेख छ, औषधीका रूपमा ।सिद्धियोग परेको बिहीबारका दिन आकाशबाट परेको पानी रुद्राक्षको फूलमा परी तत्काल बन्द हुँदा त्यसबाट एकमुखे रुद्राक्ष फल्न सक्छ भन्ने पनि शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा उल्लेख छ ।यसलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ । अत्यन्तै दुर्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ ।
विश्वासीहरूका अनुसार, यसलाई धारण गरे सुखशान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य र बुद्धि मिल्छ । चरक संहितामा पनि यसबारे उल्लेख छ, औषधीका रूपमा ।सिद्धियोग परेको बिहीबारका दिन आकाशबाट परेको पानी रुद्राक्षको फूलमा परी तत्काल बन्द हुँदा त्यसबाट एकमुखे रुद्राक्ष फल्न सक्छ भन्ने पनि शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा उल्लेख छ ।लोकश्रुति अनुसार, एउटा बोटमा यस्तो रुद्राक्ष १२ वर्षमा तीनवटा मात्र फल्छन् ।जसमध्ये एउटा आकाश र अर्को पातालमा जान्छ भने तेस्रोचाहिँ धर्तीमा रहन्छ । यो शिवरात्री, पूर्णिमा वा विशेष दिनमा मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ ।येसलाइ शेयर गर्दा फलिफाप हुन्छ।
हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई सूर्योदय सम्मान